शरीरलाई भिटामिन डी किन आवश्यक छ ?
स्वस्थ तथा निरोगी रहनु हरेक व्यक्तिको चाहना हो । तसर्थ स्वस्थ र निरोगी रहनका लागि हरेक व्यक्तिले उचित मात्रामा सबै प्रकारका भिटामिनहरु सेवन गर्नु आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिव २० प्रकारका भिटामिनहरुको बारेमा अनुसन्धान भैरहेको छ । यद्यपि, ती मध्ये भिटामिन ए, बी, सी, डी तथा के चलनचल्तिमा छन् । यी मध्ये हाम्रो शरीरलाई अति आवश्यक भिटामिन डीका बारेमा केही जानकारी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं ।
शरीरलाई भिटामिन डीको आवश्यकता
के-के मा पाइन्छ भिटामिन डी ?
यसको कमीले के-के हुन्छ ?
गर्भवती महिलाहरुले विभिन्न प्रकारका स्वास्थ समस्याबाट ग्रसित हुनु पर्छ । त्यस्तो बेलामा उनीहरुको शरीरमा भिटामिन डीको कमि भयो भने मल्टिपल सिरोसिसको सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । त्यसो त भिटामिन डी हाम्रो आँखाका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ ।
हालै गरिएको एउटा अध्ययन अनुसार भिटामिन डीको प्रयोगले नजिकको दृश्य हेर्न गाह्रो हुने समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । यसका साथै जुन महिलाले बाल्यकालदेखि नै भिटामिन डीको सेवन गरेका हुन्छन्, उनीहरुलाई महिनाबारीपछि हड्डीसँग सम्बन्धित रोगहरु लाग्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ ।